Ihe omume na usoro ihe omume ahia | Martech Zone
Mgbe m na-eche azụ na ụfọdụ n'ime ndị dị ịtụnanya ihe m gara, dị ka Njikọ Webtrend, Mmekọrịta ExactTarget na Ngosi BlogWorld - A na - ekupụm ọnụ ọgụgụ na - agagharị na ihe omume na etu esi eme ha n’otu n’otu.
Adịghị m onye nhazi ihe omume. Enwere m ike ịmanye karịa ndị ahịa n'otu oge, echefula ọtụtụ puku ndị ọbịa. (Ọ bụ ya mere Jenn ji eso anyị rụọ ọrụ!). Fọdụ folks enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọrụ nke ndị ọkachamara na-eme atụmatụ ihe omume, agbanyeghị, a manyere ha ịga naanị ha. Ihe omume mbu bu ihe siri ike ma ha yie ka odi ala. Ozugbo otu ihe omume dị n'okpuru eriri gị, ị nwekwara ndị na-ege ntị iji kwalite ihe omume na-esote. Ọ bụrụhaala na mmemme gị dị oke mma, ị nwere ike ịga n'ihu na-eto eto oge na-ewulite uru nke mmemme ahụ, ndị na-akwado ya, na ndị na-ege ya ntị.
Ihe omuma a site na Hubspot na Kpọtụrụ na mgbe niile na-ejegharị site na isi ihe niile nke mmemme na nkwalite, gụnyere ịtọlite ​​ihe omume gị, ịkwalite ihe omume gị, ịkwalite mgbasa ozi mmekọrịta, nsuso, ịme ihe omume na ntinye ihe omume. M hụrụ n'anya na infographic ahụ na-ekwu okwu iji tinye n'ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta! Site n'inwe ndị na-arụsi ọrụ ike tweeting na ihe omume ihe omume gị, ị na-akwalite ogo nke mmemme ahụ na netwọkụ ha. Nke ahụ bụ isi maka afọ na-abịa… mgbe ị gbanwere ha site na ndị voyeurs ka ha sonye!
Tags: mmemme ahiaIhe omumeihemarketing
Nzọụkwụ 10 iji mepụta nyocha ndị dị n'ịntanetị
Ọkt 1, 2011 na 10:53 AM
Ọ bụ eziokwu… naanị n'ihi na ị dị mma na ihe apụtaghị na ịchọghị usoro atụmatụ ire ahịa na ire ahịa.
Jun 8, 2012 na 11:26 AM
Doug nke a bụ nnukwu nchọta, M na-achọ ọmarịcha ihe ọmụma dị ka nke a. Aga m ekerịta nke a na ụfọdụ ndị enyi. Nkwadebe bụ aha egwuregwu!